Mpanohitra : Matahotra fifidianana -
AccueilRaharaham-pirenenaMpanohitra : Matahotra fifidianana
10/05/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Mandia fotoan-tsarotra tokoa ny mpanohitra eto amintsika amin’izao fotoana izao ary tsy manana fahavononana hiatrika fifidianana velively mihitsy. Eo aloha ny olana anatiny vokatry ny ady an-trano ny ho amin’izay kandidà hilatsaka amin’io fifidianana filoham-pirenena io. Samy te ho filoham-pirenena avokoa mantsy ireo mpitarika ary tsy afaka ny hifanara-tsaina mihitsy raha tsy hiresaka afa-tsy Andry Rajoelina sy Hajo Andrianainarivelo. Manaraka izany, fantatr’izy ireo tsara mihitsy fa ratsy endrika eo anatrehan’ny vahoaka izy ireo ary ho sarotra ny handresy lahatra ny olom-pirenena amina fifidianana koa ny vahaolana mety indrindra dia ny fanakorontanana ny fifidianana sy ny fampikatsoana ny fiainam-pirenena.
Ny hanao izay hisian’ny Tetezamita vaovao fa tsy ny hisian’ny filoham-pirenena voafidim-bahoaka no tanjon’ny mpanohitra amin’io fifidianana amin’ny taona 2018 io. Tsy vonona hiatrika izany fifidianana izany ny mpanohitra ary azo tsapain-tanana izany. Inona no tanjona amin’io fanakorontanana ny fifidianana io? Tsotra ny valiny: izay hanilihana ny filoha Hery Rajaonarimampianina. Izay ihany!
Loza mitatao ho an’ny firenena sy ny fiainam-bahoaka anefa izany ary izay indrindra no nitenenana teto ny hoe « fitiavan-tena » no manosika ireo mpanohitra. Fantatr’izy ireo tsara ny voka-dratsin’izany korontana sy Tetezamita izany eo amin’ny fiainam-pirenena, vao avy nivoaka tamin’ny sazy nandritra ny dimy taona i Madagasikara noho iny fanonganam-panjakana ny taona 2009 iny. Fa tsy mampaninona azy ireo izany satria manana ny ampy hiantohany ny fiainan’ny ankohonany avy izy ireo, fa mba ahoana kosa ny fiainam-bahoaka, mba mieritreritra ny fahavoazana hanampy ny efa nozakain’ny vahoaka ve izy ireo?
Momba an-dRavalomanana Marc manokana, andrasana izay mba ho fanambarana ataon’ny biraon’ny SMM manoloana ny didim-pitsarana manameloka azy higadra mandra-pahafatiny. Raha ny zava-misy hita maso aloha dia tena asehon’ity filoha tale jeneralin’ny orinasa Tiko ity mihitsy fa tsy misy dikany aminy izany Fitsarana izany!
Ny momba an-dRavalomanana Marc indray izay tena maneho eo imason’ny olon-drehetra fa tsy misy dikany aminy izany Fitsarana izany ka ametrahana fanontaniana amin’ny SMM